Isahluko se-2855 seNdodana emangalisayo kwi-Law Novel Free Online | XperimentalHamid
Isahluko se-2855 seNdodana emangalisayo kwi-Law Novel Free Online
Aprili 11, 2021 Aprili 10, 2021 by Qasim Khan
funda Isahluko 2855 yenoveli Unyana omangalisayo eMthethweni by INkosi igqabi simahla kwi-Intanethi.
Ngokukhawuleza emva kokuba uAnson ejonge phezulu kwaye ebabona bobabini, wothuka kancinci kwaye wancuma ngoncumo oluncumisayo ngandlela ithile: “Owu, mdala kangakanani! Yhu! AmaRoma abuyile nawo! Ilunge kakhulu! Ndingamema amaRomany ngeli xesha. Nkosi, uyakonwaba xa amaRomany ephuma entabeni! ”
U-Anson akazange ajongele usapho kakhulu. Emehlweni akhe, usapho lakwa-He yayingabantu nje abangaphantsi kosapho lakwaSu, kwaye babengaphantsi kwabo kuphela abanokufumana indawo ngokulwa nokubulala.
Ke yena, nangona ekwisikhundla esiphantsi, ubuncinci ukwindawo ephezulu phakathi kwabo bangaphantsi.
Ngamanye amagama, usapho lakwaSu lunezinja ezininzi, kwaye ungoyena ubalaseleyo.
Nangona kunjalo, wajonga kuphela amaRomany, kuba ngapha koko, iRomany ngumfazi waseZynn, unyana olizibulo wosapho lakwaSu. Nangona engenasikhundla, ubuncinci uzele intombi kaZynn, ke yena uthobekile eRoma.
Okubaluleke ngakumbi, unkosikazi kaZynn, uLiona, wenze isigqibo sokuqhawula umtshato noZynn, kwaye emva kwengozi yemoto ecetywe ngutata wakhe, ngokuqinisekileyo uya kuzobe umgca ocacileyo nosapho lakwaSu. Ngale ndlela, amaRomany angavela ngokuvulekileyo. Iphi imfuneko yokufihla kwakhona!
Kwimeko apho uZynn abuya ngenye imini, mhlawumbi kuya kubakho ukulandelelana kunye neRoma.
Ichanekileyo ngenxa yale nto yokuba u-Anson unesimo sokuthopha kwi-Roma.
Xa amaRoma abona uAnson, wambulisa engenabubele waza wathi: “Molo Steward Su.”
U-Anson wancuma wathi ngokungxama: “Roma, khange sibonane kangangeminyaka.”
Wanqwala: “Ewe, sekudlule iminyaka.”
U-Anson wancuma wathi, “Bendingalindelanga nokuba ungaphinda uphume entabeni ngeli xesha. Yandimangalisa! ”
ULuther osecaleni wathi kancinci: “Anson, nceda uxele kwi-Master Su emva kokuba ubuyile. Intsapho He ayinakho ukusebenzisana nosapho lakwaSu ngeli xesha. Ndicela ucele uMaster Su asixolele. ”
UAnson wayiva le nto wabuza emangalisiwe: “Mdala yena, uculela bani kwakhona?! Unogada webhasi uyeza ngokukhawuleza! ”
U-Luther wanikezela ngetsheki ye-billion-yuan ku-Anson, wathi ngokunyanisekileyo: “Senditshilo ngokucacileyo. Intsapho yakhe ayinakho ukusebenzisana nosapho lakwaSu ngeli xesha. Ngamanye amagama, asizukuhamba nawe namhlanje. Ke, nceda uthathe le mali uyibuyisele ku-Master, nceda. ”
UAnson ngequbuliso waba nexhala, wathi: “Heyi xhego, ngekhe wenze impazamo! Makhe ndikubuze, ungayitshintsha njani ingqondo yakho ngequbuliso xa sele kwenziwe amalungiselelo? ”
Ngeli xesha, izibulo likaLuther uTom naye wakhalaza: “Tata! Umgcini wendlu uSu ulungile. Usapho lwethu lusoloko luzigcinile izithembiso zethu, kwaye asizisophuli izithembiso zethu, ndingasathethi ke ngoku.
Ngenkani uLuther wathi: “Tom, akunyanzelekanga ukuba uzame ukundeyisela apha, ndigqibile, kwaye andinakuze ndiyitshintshe!”
Emva koko, wajonga uAnson, waqhina amanqindi wathi: “Mnu. Anson, linda imoto ingene ithutyana, ndicela undisokolise ubuye nemoto ngokwakho, ixhego liza kuhlala apha, ndiyaxolisa kakhulu! ”
Isahluko se-2854 seNdodana emangalisayo kwi-Law Novel Free Online
Isahluko se-2984- 2985 seDish esona siNgcono kwiNoveli yeCold
Ingcinga eyi-1 kwi "Isahluko 2855 soNyana oMangalisayo eMthethweni kwiNoveli yasimahla kwi-Intanethi"
Epreli 10, 2021 kwi-7: 42 PM